लण्डन बसेर जन्मभूमिको सेवा : पार्वतीपुरमा ‘शुद्ध पानी वितरण अभियान’ चलाउँदै धनबहादुर सार्की (भिडियोसहित) - Khula Patra
प्रकाशित समय: २२:४४:२१
काठमाडौं । भनिन्छ, आमाको काख छोडेपछि गाँस पनि छुट्छ । तर, हाम्रो देशको अवस्था नै त्यस्तै छ, गाँसका लागि आमाको काख छोड्नैपर्छ । त्यस्ता लाखौँ नेपाली छन्, जसले आफ्नो मातृभूमिको काख छाडेर पराई भूमिमा संघर्ष गर्न बाध्य छन् । तर, परदेश पुग्दैमा जन्मभूमिको माया र माटो भने बिर्सिएका हुदैनन् । त्यस्तैमध्ये एक हुन् लण्डनमा बसोबास गर्दै आएका समाजसेवी धनबहादुर सार्की ।
उनी गोरखामा जन्मिए । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२१ को पार्वतीपुरमा किशोरावस्था बिताए । माध्यमिक तहको शिक्षा उनले त्यहीबाट लिए । सामान्य दलित परिवारमा जन्मिएका धनबहादुरले बेलायत आर्मीमा जोडिने मौका पाए ।
आर्मीमा १५ वर्ष सेवा गरे । बेलायत उनको कर्मथलो बन्यो । जागिरबाट सेवानिवृत्त भएपछि उनले त्यहीबाट उच्च शिक्षा लिए । अब त्यहीका व्यवसायी र एक कुशल राजनीतिज्ञ समेत बनेका छन् । तर, आफुले टेकेको माटो र मातृभूमिको प्रेमले उनलाई तान्न छाडेको छैन । त्यो प्रेमलाई उनले सामाजिक कार्यमा परिणत गरेका छन् । कोभिड–१९ को महामारी र बन्दाबन्दीका बेला हजारौँ विपन्न परिवारको चुल्हो बाल्न सहयोग पु¥याए ।
‘त्यसबेला हामीले बेलायतबाट केही हजार परिवारलाई मात्रै सहयोग पु¥याउन सक्यौँ, तर मलाई वास्तवमा नेपालको दुर्गमका जनताको जीवन कस्तो अवस्थामा छ ? भन्ने राम्रो ज्ञान भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अब उनीहरुकै लागि अझै धेरै गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध भएको छ ।’ उनी बेलायतको लण्डन शहरमा बस्छन् । तर, उनलाई नेपालको गाउँका दलित, विपन्न र सुकुम्बासी परिवारको चिन्ता लागिरहन्छ ।
‘म आफुले कति सक्छु, थाहा छैन । तर सकेसम्म सबैसँग सहकार्य गर्छु, र त्यस्ता विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न मद्धत पु¥याउँछु भन्ने लागेको छ,’ उनी भन्छन् । उनीे अब विपन्न परिवारको जीविकोपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा गर्न उत्साहित छन् । एक महिनाअघि जन्मथलो नेपाल आएका उनले आफुले बालउमेर बिताएको गाउँ पार्वतीपुरमा ‘शुद्ध पानी बितरण अभियान’ थालेका छन् ।
पार्वतीपुर एउटा सानो गाउँ हो । जो चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २१ मा पर्छ । जहाँ गरिब र दलितमात्रै होइनन्, सयौँ परिवार सुकुम्बासी समेत छन् । ‘न राम्रो घर छ, न पानी । न व्यवस्थित शौचालय छन्, सबै कुरा सरकारले पनि गरिदिएको छैन । मान्छेहरु दुःखदायी जीवन बाँच्न बाध्य छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो देखेपछि केही त गरौँ भन्ने लाग्यो, त्यसैले कम्तिमा उनीहरुलाई शुद्ध पानी पिउने बातावरण बनाऔँ भनेर लागेको छु ।’
आफुले बाल्यकाल बिताएको गाउँ पुगेका धनबहादुरले पार्वतीपुरका १० घर परिवारलाई घर–घरमा धारा जोडेर पानी पु¥याईदिएका छन् । उनले रंगिलाका शंकर नेपाली, पार्वतीपुरका मञ्जु नेपाली, सोमबहादुर सार्की, हेम भट्ट, राममाया विक, मंगलबहादुर विक, रतनपुरका माया सार्की, पारिलोटारका लुरे विक, सितापुरका सुकबहादुर विक र कञ्चनबस्तीका मनोज भुजेलको घरमा धारा जडान गरिदिएका छन् । उनले अब करिब तीन सय परिवारलाई लक्षित गरी शुद्ध पानी वितरण अभियान चलाउने बताए ।
सो वडाका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णकुमार गुरुङले समाजसेवी धनबहादुर सार्कीले वडाका सुकुम्बासी, गरिब दलित परिवारलाई शुद्ध पानी वितरण गर्ने उदेश्यले सहयोग गरेको बताए । ‘हाम्रो वडामा धेरै विपन्न परिवार छन्, उनीहरुको आर्थिक अवस्थाका कारण आफैँले धारा जोड्ने अवस्था थिएन । उनीहरु खानेपानीबाट बञ्चित थिए । परदेशमा बसेर पनि धनबहादुरजीले यहाँ गरिब वडाबासीलाई घरमै पानी पु¥याइदिनुभएको छ । उहाँको सहयोगका लागि म वडाध्यक्षको हिसावले धन्यवाद दिन चाहान्छु,’ वडाध्यक्ष गुरुङले भनेका छन् ।
समाजसेवी सार्कीले आफुले १० परिवारलाई घरमा धारा जडान गरिदिएको भन्दै बाँकी सबै परिवारका लागि हुने गरी सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरे । ‘म लण्डनमा बस्छु । तर, म जन्मेको माटो यही हो । आफ्नो माटोको माया कसलाई हुदैन र ? त्यसैले मलाई आफु भौतिकरुपमा यहाँ रहन नसकेपनि नेपाल र नेपालीको सेवा गर्न मन पर्छ, त्यसैले दुःख पीडामा परेका नेपालीहरुलाई मद्धत गर्दै आएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘मैले सक्ने त गरिरहेकै छु । म यस्तो काममा हातमा हात मिलाउन बेलायतबासी सबै नेपालीहरुलाई आग्रह गर्दछु ।’
जागिर सकिएपछि पढाई, उतै व्यवसाय
बिट्रिस आर्मीका जागिरे धनबहादुर सन् २००१ मै रिटायर्ड भए । आधा उमेर बाँकी थियो, सोचे अब यतै पढ्छु, बाँकी उमेर केही उद्यम गरेर बिताउँछु । उनले सानी पाँच वर्षे छोरीलाई पनि साथै लिएर पढ्दै पढाउन थाले । ‘म पेन्सन हुँदा ३२ वर्षको थिएँ, ३३ वर्षदेखि पढाई सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो । छोरीलाई पनि यतै ल्याएँ, अनि आफुपनि पढ्न थालेँ,’ उनी भन्छन् ।
जागिरे जीवन छाडेका उनको अब सामाजिक जीवनमा रुचि बढ्न थाल्यो । एक समय चिनेकै एक दलित साथीलाई शोक प¥यो । ‘हाम्रो संख्या खासै धेरै थिएन । फेरि दलित भएपछि कसैले छुन नमिल्ने, लास उठाउनै समस्या भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि अब संगठित हुनुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो । र हामीले संस्थागत अभ्यास थाल्यौँ ।’
उनीहरुले नवजागृति नेपाली समाज युकेको स्थापना गरे । उनी संस्थापक उपाध्यक्ष भए । सन् २००५ मा युके सरकारले परिवारलाई पनि आवासका लागि स्वीकृति दियो । सबैले गोरखा सैनिकहरुले परिवारै लैजाने स्वीकृति पाए । परिवारै लैजाने स्वीकृति पाएपछि बेलायतमा नेपालीहरुको संख्या बढ्यो । उनीहरुको संस्थाले पनि काम गर्न सकेन । सन् २००७ मा विघटन नै भयो । तर, उनलाई समुदायका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भोक मेटिएकै थिएन ।
त्यहीकारण सन् २००७ मा सिर्जनशील नेपाल समाज युकेको स्थापना भयो । उनी त्यसबेला पनि संस्थापक उपाध्यक्षनै भए । तर, त्यो संस्था भने राम्ररी अघि बढ्यो । उनी विभिन्न पद हुँदै अध्यक्षसम्म भएर पनि काम गरे । सन् २०१९ मा उनी त्यहाँ अध्यक्ष भएपछि संस्थाको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । त्यसपछि उनकै नेतृत्वमा सन् २०१९ मा नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेकाे स्थापना भयो । उनी अहिले पनि त्यही संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
त्यसपछि उनी एनआरएनए युकेको उपाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । तर, उनी निकटतम प्रतिद्धन्द्धीका रुपमा पराजित भए । ‘मैले चुनाव त जितिनँ । तर, धेरै साथीहरुले माया गर्नुभयो, यति माया गर्नुभयो कि म आफुलाई हारको महसुस नै भएन,’ उनी सुनाउँछन् ।
त्यसयता उनको लण्डनमै व्यवसाय थालेका छन् । ‘मेरो धेरै समय अब व्यवसायमै बितेको छ । बचेको समय समाजसेवामा बिताएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘अब बाँकी समय पनि त्यस्तै गर्ने मन छ ।’
उनी अहिले नेपाल उत्पीडित जातीय समाज युरोपको बर्तमान उपाध्यक्ष समेत छन् ।
अन्नपूर्णमा विपन्न विद्यार्थीकालागि छात्रवृत्ति अक्षयकोष
पार्वतीपुरमै छ, अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालय । गाउँका विपन्न, गरिब दलित समुदायका बालबालिकाले पढ्ने नजिकको एउटै विद्यालय हो यो । यही विद्यालय हो, जहाँबाट समाजसेवी सार्कीले पनि एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । उनले अब विद्यालयमा पढ्ने विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिदिएका छन् । ‘मैले पढ्ने बेला धेरै समस्या थिए । तर, अहिले प्रविधिको युग छ । त्यहीअनुसारको शिक्षा पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँका विपन्न बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सहज होस् भनेर अक्षयकोष स्थापना गरेको हुँ ।’
सार्कीले सो कोषमा सुरुवातमा दुई लाख १० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । उनले बुवा पूर्णबहादुर, आमा हिराकुमारी, ठूलो बुवा सन्तमान र ठूलीआमा रुपा सार्कीको स्मृतिमा अक्षयकोष स्थापना गरेको बताए । ‘कोषको ब्याजबाट आएको रकममध्ये ३० प्रतिशत साँवामा जोडिन्छ । १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटौती हुन्छ । बाँकी ६० प्रतिशत रुपैयाँ अतिविपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ,’ प्रधानाध्यापक बटुकलाल तामाङले भने ।
समाजसेवी सार्कीले विपन्न र दलित समुदायका बालबालिकाको विद्यालय पहुँच बढाउनका लागि अन्य क्षेत्रमा पनि कोष स्थापना गर्ने योजना रहेको सुनाए । ‘दुर्गममा त्यस्ता धेरै ठाउँहरु छन्, जहाँ बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ।
उनीहरुको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलेमात्रै लगानी गरेर सम्भव छैन, त्यसैले हामी प्रवासी नेपालीहरुको सहयोगबाट थोरै भएपनि सहयोग पुग्न सक्छ भनेर यसलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने सोचेको छु,’ समाजसेवी सार्कीले भने । उनले यो अभियानमा जोडिनका लागि समेत सबै प्रवासी नेपालीहरुलाई आग्रह गरे ।
सार्कीले पावतीपुरकै अर्को श्रीआधारभूत विद्यालयमा पनि खेलकुद सामाग्री खरिद र सञ्चालनकालागि सहयोग गरेका छन् ।